Vaovao - Ahoana ny fomba fanadiovana sy fikojakojana ny boaty vita amin'ny dite
Fisotroana zava-pisotro sy divay
Kodiarana Wax fiara
Vata fanitsiana tsy ara-dalàna
Ahoana ny fomba fanadiovana sy fikojakojana ny boaty vita amin'ny dite
Matetika ny olona dia miteny hoe: "Zavatra fito hanokatra varavarana, kitay, vary, menaka, sira, saosy ary dite vinaingitra." Mampiseho izany fa niditra an-tsokosoko tamin'ny sehatra rehetra ny dite. Ka tia misotro dite ny vahoaka sinoa, ka samy mahafantatra momba ny fikojakojana boaty fonosana dite ve ianareo rehetra?
1. Miezaha hisoroka ny fifandraisan'ny tasy amin'ny menaka eo amin'ny boaty fanitso. Raha sendra mahazo loto tsy dia sarotra esorina ianao dia aza esorina amin'ny zavatra mafy. Azonao atao ny mametraka lavenona sigara amin'ny loto ary mamafa azy amin'ny lamba landihazo mba hanesorana ireo tasy. Tasy eo an-toerana Afaka mamafa azy amin'ny lamba landihazo madio atsobika ao anaty paty poloney.
2. Ny boaty vita amin'ny dite misy velarana matte dia azo diovina amin'ny rano misy savony mafana; raha ny boaty vita amin'ny dite vita amin'ny tampony kosa dia azo esorina amin'ny rano fanasana volafotsy avo lenta mba hitazomana ny famirapiratana mamirapiratra maharitra ela.
3. Aza asiana sakafo na zava-pisotro ao anaty boaty vita amin'ny dite mandritra ny alina mba hisorohana ny fandotoana ny tampony. Aorian'ny fanadiovana ny boaty vita amin'ny dite dia ataovy izay hanadiovana azy tsara sy hamaina azy ara-potoana, satria ny detergent sisa tavela sy ny rano mitete dia hanimba ny tampon'ny boaty fanitso dite.
4. Aza mifandray amin'ny boaty vita amin'ny dite amin'ny lelafo na apetraka amin'ny faritra mafana. Rehefa nafanaina hatramin'ny 160 degre Celsius ilay boaty vita amin'ny dite, dia ho malemy ny endriny ary hodiovina na hoatran'ny lovia ireo fitaovana ireo. Noho izany, ny mpanamboatra boaty fanitso dia manoro hevitra anao hikarakara ny dite Aza manafana ny asan'ny vata vy ambonin'ny 160 degre Celsius mba hisorohana ny fahasimbana.
Raha ny marina dia tsy sarotra ny manadio sy mitazona ilay boaty vita amin'ny dite, ary tsy mora ny milaza fa tsotra izany. Miankina amin'ny fomba fanadiovanao sy fitazonana ilay boaty vita amin'ny dite izany.
Adress: No.14, Longcheng Mid-road, Longcheng Street, Longgang District, Shenzhen, Sina
Ahoana ny fomba fanamboarana boaty firapotsy mitondra traff ...
Enina fenitra ho an'ny boaty famonosana sakafo
Inona avy ireo tombony sy fatiantoka ...
Fepetra takiana sy fomba fitehirizana dite fotsy
Inona no tsy itovizan'ny char ...
Box an'ny mpifankatia ho an'ny sipa, Tea Tin Box, Boaty tin manokana, Face Coin Bank, Vata famonosana antsinjarany, Boaty haingon-trano latabatra kafe,